theZOMI: Burma News International - May 8, 2013
Burma News International - May 8, 2013
A $2 mobile SIM costs dearly at countryside
In April, Myanmar Post and Telecommunication (MPT) unveileda1,500 Kyat (less than $2) worth CDMA mobile SIM to the public in the country and has reached the countryside recently but the costs have risen many folds, according to local news sources.
Peace process: So many promises, few implementations
Loi Taileng — 19 May 2012 was the last time the Shan State Army (SSA) South, officially the Restoration Council of Shan State /Shan State Army (RCSS/SSA) and Naypyitaw’s Union Peacemaking Work Committee (UPWC) met in Kengtung to signa12 point union level agreement.
Myanmar to light up world's third largest solar plant
The Ministry of Electric Power has signedamemorandum of understanding (MoU) for Thai energy company, Green Earth Power (GEP), to buildaUS$275 million solar power plant in Myanmar.
The Myanmar National Human Rights Commission has urged the government and the Central Committee for Implementation of Stability and Development in Rakhine State to urgently implement the recommendations of the Rakhine Investigation Commission in the strife-torn region.
Mon group calls for release of young detainees
A Mon youth group has urged authorities to release all 11 people detained since mid-April for allegedly attackingapolice officer during the traditional Water Festival in Mon State.
ASEAN defense ministers pledge military cooperation
Defense ministers from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) met on Tuesday in Brunei to discuss ongoing relations across the bloc.
Ten residents of Maday Island, who were charged on April 19 for protesting against the island’s pipeline project without official permission, were released on bail on Monday followingahearing at Kyaukphyu Township Court, according to the Malay Island Development Committee.
A labor activist was jailed for seven years and six months, after being falsely accused of illegally cutting down trees, Burma Campaign UK,ahuman rights group that focuses on Burma, said.
Myint Kanpon residents aim to increase the numbers of teachers at the government primary school in Myint Kanpon, Dawei Township, Tenasserim Division.
KIO ကျောင်းတွင် တရုတ်စာကို ဘာသာရပ် တခုအဖြစ် စတင်သင်ကြား
ကချင်ပြည်နယ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်သည့် မိုင်ဂျာယန်မြို့ (Mai Ja Yang) ထွယ်နင်ရှောင် (Htoi Ning Shawng) အထက်တန်းကျောင်းတွင် ယခုနှစ် ပညာသင်နှစ်မှစ၍ တရုတ်ဘာသာရပ်ကို ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်း သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သျှမ်းမြောက် စစ်ဘေးရှောင်ခလေးများ ပညာရေးအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှစီစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ၂၀၁၂ ဇွန်လ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အဖြစ် တရားစွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ရခိုင်အမျိုးသား (၁၀) ကို စစ်တွေ ခရိုင်တရားရုံးက မေလ (၇) ရက် မနေ့က ထောင်ဒဏ် အသီးသီးစီ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အန်ဂျီအို (၂) ခု ကျန်းမာရေးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အရေး တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွင် ဆောင်ရွက်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ်သို့ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (အန်ဂျီအို) နှစ်ခု ပထမဆုံး အကြိမ် ၀င်ရောက်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လေ့လာ ဆန်းစစ်မူတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ လူ့အခွင့်ရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ Organisation ရခိုင်လူ့အခွင့်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AHRDO) Arakan Human Rights and Development မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့မှ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မင်းဦး က ပြောကြားသည်။
Last Updated on ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 08 ရက် 2013 ခုနှစ်
နိုင်/ကျဉ်းဟောင်းများ အတွက် ၄၀၁ ခြိမ်းခြောက်နေဟု AAPP သတိပေး
ဦးနေမျိုးဇင် အား ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ပြန်လည် ချမှတ်လိုက်ခြင်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအား ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောင်ရေးအသင်း (AAPP)က ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
သောင်ရင်းမြစ်ရှိ စက်လှေ တစင်းကို BGF တပ်သား မှ သေနတ်ပစ်ဖောက်တားမြစ်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ်အတွင်း ဘိလပ်မြေအိတ်များ တင်ဆောင်လာသော စက်လှေတစ်စင်းကို မြ၀တီမြို့ အခြေ စိုက် နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF (၁၀၂၁) တပ်ရင်းပိုင် အမှတ်-၁၄ ဂိတ်မှ တပ်သားတစ်ဦးက ယမန်နေ့ မေလ ၇ရက်နေ့က သေနတ် ပစ်ဖောက် တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကယားပြည်နယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများ လျော့ချစေလို
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အထူးဒေသ(၃) ရှိ ကျေးရွာများတွင် ပညာရေးကဏ္ဍတိုးမြှင့် လိုပါက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ် ထားသော စံနှုန်းများကို လျော့ချစေ လိုကြောင်း ကယားပြည်နယ်တွင်း ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ် (KNGY)က ပြောသည်။
၀ တပ်ဖွဲ့ကို စစ်လက်နက် ပို့ပေးမှု တရုတ် ငြင်းဆို
မြန်မာ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားကို ထိုင်းကုမ္ပဏီတရားစွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချန ဘူရီရှိ နာနတ်သီး စည်သွပ်ဘူး လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေသော NatGroup ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာ အလုပ်သမားများ အပေါ် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ချိုးဖေါက်မှု ရှိခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းဖေါ်ထုတ် ခဲ့သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား တဦးကို တရားစွဲ ခဲ့ကြောင်း Burma Campaign UK မှ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
KIA နှင့် အစိုးရတပ်များ အဆက်မပြတ် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေ
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ များသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား လာနေကြောင်း KIO နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ တာဝန်ခံ ဂျိန်းလွန်းတောင်က ပြောပါသည်။